Xildhibaan Sagal Biixi si yaableh ugu hadashay qaraarka xukuumadda Kheyre ee xiisadda Sacuudiga iyo Kanada! – War La Helaa Talo La Helaa
Iyada oo ay dowladda Soomaaliya caddeysay mowqifkeeda ku aadan khilaafka u dhaxeeya boqortooyada Scauudiga iyo dowladda Canada, oo ay is dhinac taagtay maamulka Riyad ayey xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si kulul u naqdisay go’aanka dowladda.
Xildhibaan Sagal Isaaq Biixi oo qoraal soo dhigtay tirsiga ay ku leedahay barta twitter ayaa sheegtay in uu yahay wax lagu qoslo mowqfika dowladda federaalka ah.
Qoraalkeeda ayaa intaas ku daray, “Warqaddan-Bayaanka dowladda Soomaliya-kama hadleyso waxa ka dhex jira Sacuudiga iyo Kanada balse waxa ay bidhaamineysaa heerka sida arrimaha haweenka aysan ugu jirin siyaasadeenna iyo go’aamadeenna maalinlaha ah-waa wax laga xumaado” ayey tiri xildhibaan Sagal.
Qarax Ay Askar Ku Dhinteen Oo Ka Dhacay Gudaha Kenya